Gobolka Banaadir maxaa la gudboon? |
Gobolka Banaadir maxaa la gudboon?
Waxaa si xowli ah u socda dhaqangelinta nidaamka Federaalka ee Soomaaliya.
Dowladda Federaalka ayaa go’aansatay in Jubbooyinka, Koofur-Galbeed iyo Gobolada Dhexe ay noqdaan Maamul Goboleedyo, halka la aaminsanyahay in Dowladda ay dooneyso in Gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan inay iyagana is raacaan, walow ay dadka deegaanka qabaan fikrado kale, oo Hiiraan ay qabto inay gooni isu taagto, halka Shabeelaha Dhexe ay doonayaan inay Banadir ku darsamaan.
Gobolka Banadir oo ka mid ah 18kii gobol ee jirey oo Dastuurkana aqoonsanyahay maxuu xaalkiisa noqonayaa?.
Markaad u fiirsato Guddoomiyaha Gobolka Banadir ayaa waxuu isku hayaa labo jago oo ah kan Guddoomiyaha Gobolka Banadir iyo kan Duqa Magaalada Muqdisho oo sidaas ayey Muqdisho iyo Banadir u kala baxsan yihiin.